ch 17 ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 17 ယောဟန်သည်
17:1 ယရှေုသညျဤအရာတို့ကိုကပြောပါတယ်, ပြီးတော့, မိုဃ်းကောင်းကင်သို့သူ၏မျက်စိမချီ, ဟုသူကပြောသည်: "ခမညျးတျော, အခြိနျနာရီကိုရောကျပွီ: သင့်ရဲ့သားတော်သည်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, သင့်ရဲ့သားတော်သည်ကိုသင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါဒါ,
17:2 သငျသညျအထံတော်သို့လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်အုပ်စိုးပေးပြီနည်းတူ, သူသည်သင်တို့ထံတော်သို့အပ်ပေးတော်မူသောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းငှါဒါ.
17:3 ဤရွေ့ကား, ထာဝရအသက်ပေတည်း: သူတို့သည်သင့်သိစေခြင်းငှါ, တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခငျသညျ, ယရှေုသညျခရစျတျော, သင်တို့ကိုစေလွှတ်သော.
17:4 ငါမွကွေီးပျေါမှာသငျသညျဘုနျးပှငျ့ပြီ. ငါပြည့်စုံစေခြင်းငှါသငျသညျအကြှနျုပျကိုပေးသောအလုပ်ကိုပြီးစီးပြီ.
17:5 ယခုမှာအခမညျးတျော, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွင်းအကြှနျုပျကိုခြီးမွှောကျ, ကမ္ဘာ့အစဉ်အဆက်ခင်မှာငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သောဘုန်းအသရေနှင့်အတူ.
17:6 ငါသည်သင်တို့ကိုကမ္ဘာ့အထဲကအကြှနျုပျကိုမှပေးပြီတော်မူသောလူတို့အားသင်တို့၏နာမထင်ရှားကြပြီ. သူတို့ကရင်းသင့်ခဲ့ကြ, သငျတို့သညျငါ့ကိုအားပေး၏. ထိုသူတို့ကသင့်ရဲ့စကားလုံးစောင့်ရှောက်ပြီ.
17:8 ငါသည်သူတို့ကိုသင်သည်ငါ့အားပေးသောစကားမြားကိုပေးပြီများအတွက်. ထိုသူတို့ကဤစကားမြားကိုလကျခံခဲ့ကြပါပြီ, သူတို့ကသင်တို့ကိုငါမှထွက်သွားလေ၏ကြောင်းအမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီ, ထိုသူတို့သငျသညျငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောယုံကြည်.
17:9 သူတို့ကိုငါအဘို့ဆုတောင်းကြလော့. ငါသည်ဤလောက၏အဘို့ဆုတောင်းကြလော့ပါဘူး, သင်မူကားငါ့အဖို့ပေးပြီဘယ်သူကိုသူတို့အဘို့. အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏.
17:10 ထိုအခါငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏သမျှသောဥစ္စာ, ရင်းသင့်ကြောင်းအားလုံးငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏, ငါသည်ဤဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားပါ၏.
17:11 ထိုအခါငါသည်ဤလောက၏ထဲမှာမဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်း, ဤဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏, သင်တို့ကိုငါလာပါ၏. အလွန်သန့်ရှင်းသောအဘခမည်းတော်, သင်တို့၏နာမ၌သူတို့ကိုထိနျးသိမျး, သငျသညျကြှနျုပျအားပေးတျောမူသောသူတို့အား, သူတို့သည်တဖြစ်စေခြင်းငှါဒါ, ကျွန်တော်တို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ပင်အဖြစ်.
17:12 သူတို့ကိုငါနှင့်အတူရှိ၏နေစဉ်, ငါသည်သင်တို့၏နာမ၌သူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ. ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ထံသို့ပေးပြီသောသူတို့ကိုစောင့်ကြပြီ, မဟုတ်တဦးတည်းသူတို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်, ဖျက်ဆီးခြင်း၏သား မှလွဲ., ကျမ်းစာ၌မပြည့်စုံစေခြင်းငှါဒါ.
17:13 ယခုမှာငါသည်သင်တို့ဆီသို့ငါလာမည်. သို့သော်လည်းငါသည်လောကရှိဤအရာတို့ကိုစကားပြောပါ၏, သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်အတွင်းအကြှနျုပျ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်ဝစေခြင်းငှါဒါ.
17:14 ငါသည်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့စကားလုံးပေးပြီ, နှင့်ကမ္ဘာသူတို့ကိုမုန်းကြခဲ့သည်. သူတို့လောကီနှင့်မဖြစ်ကြသည်, ကိုယ့်ငါအဖြစ်, လွန်း, လောကီနှင့်မဖြစ်ကြောင်းကို.
17:15 ငါသည်သင်တို့ကိုလောကီထဲကသူတို့ကိုယူမယ်လို့ဆုတောငျးလကျြမဟုတျ, သင်မူကားမကောင်းသောအရာမှသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်လို့.
17:16 သူတို့ကကမ္ဘာရဲ့မဟုတ်, ငါသည်လည်းကပ်ကမ္ဘာမဖြစ်ကြောင်းကိုနည်းတူ.
17:17 အမှန်တရားမှာသူတို့ကိုသနျ့ရှငျး. သင့်ရဲ့စကားလုံးသည်သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏.
17:18 သငျသညျဤလောကသို့အကြှနျုပျကိုစလှေတျပါပွီသကဲ့သို့, ငါသည်လည်းဤလောကသို့သူတို့ကိုစေလွှတ်ပြီ.
17:19 ထိုသို့ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ကိုသန့်ရှင်းစေသောသူတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏, သူတို့နိုင်အောင်, လွန်း, အမှန်တရားမှာကိုသန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်း,.
17:20 သို့သျောလညျးငါသာသူတို့အဘို့အဆုတောငျးလကျြမဟုတျ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့စကားလုံးအားဖွငျ့အကြှနျုပျကိုယုံကွညျလတံ့သောသူတို့အဘို့.
17:21 ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးတယောက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. ရုံသင်ကဲ့သို့, ခမညျးတျော, ငါ့ကို၌ရှိကြ၏, ငါသည်သင်၌ရှိပါ၏, ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတဖြစ်စေခြင်းငှါ: လောကီသားတို့သည်သင်တို့ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီဟုယုံကြည်စေခြင်းငှါဒါ.
17:22 တဖန်သင်တို့ငါ့အားအပ်ပေးတော်မူသောဘုန်းအသရေ, သူတို့ကိုငါမှငါပေးပြီ, သူတို့သည်တဖြစ်စေခြင်းငှါဒါ, ငါတို့သည်လည်းတဝတည်းဖြစ်ကြ၏နည်းတူ.
17:23 ထိုမြစ်၌ငါဖြစ်၏, သငျတို့သညျငါ့ကို၌ရှိကြ၏. ဒါကြောင့်သူတို့တစ်ဦးအဖြစ်ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ. ထိုအခါသင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီဟုသငျတို့သညျသူတို့ခစျြတျောမူကွောငျးကိုသိစေခြင်းငှါ, သင်သည်လည်းငါ့ကိုချစ်ကြသကဲ့သို့.
17:24 ခမညျးတျော, ငါငါရှိရာလိမ့်မည်, သငျသညျကြှနျုပျအားပေးတျောမူသောသူတို့အားလည်းငါနှင့်အတူစေခြင်းငှါ, သူတို့သည်သင့်ငါ့အားပေးသောငါ၏ဘုန်းကိုမြင်စေခြင်းငှါဒါ. သငျသညျလောကီသားတို့သည်မိမိတို့တည်ထောင်ရှေ့မှာငါ့ကိုခစျြတျောအဘို့အ.
17:25 ခမညျးတျောအမြားဆုံးပဲ, လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမသိရသိရသည်. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့သိ. ထိုငျသညျငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသိ.
17:26 ထိုအခါငါကသူတို့ကိုရန်သင်၏နာမကိုသိကြပြီ, ငါကသိစေမည်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုခစျြတျောမူပြီးသောအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသူတို့ကို၌ဖြစ်စေခြင်းငှါဒါ, နှင့်နိုင်အောင်သူတို့ကိုငါ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ "